Uzicoca njani iindlebe zakho ngokukhuselekileyo | Bezzia
Indlela Yokucoca Ngokukhuselekileyo Iindlebe Zakho
UToñy Torres | | Iingcebiso zezempilo
Ukufunda indlela yokucoca iindlebe zakho ngokukhuselekileyo kubalulekile, njengoko ukusilela ukwenza oko kunokubangela umonakalo omkhulu kwinkqubo yokuva. Abantu abaninzi abayihoyi ukucoceka kweendlebe, kwaye uninzi, luyenza ngokungachanekanga. Ukusebenzisa izitya ezinokubangela umonakalo omkhulu kwaye ezibeka esichengeni impilo yeendlebe zakho.
Ukucoca iindlebe zakho kuyimfuneko, linyathelo elinye lokucoceka kwemihla ngemihla elingenakunakwa. Kuba kuyingozi ukucoca iindlebe zakho kakubi, kunokuba ungaze ukwenze. Ngoko ke, sikuzisela ezi ngcebiso ukuze fumanisa ukuba ungayiphucula njani impilo yakho yokuva.
1 Yiyiphi eyona ndlela yokucoca iindlebe zakho
1.1 Ngamanzi kwishawari
1.2 Indlela yokunyamekela impilo yeendlebe zakho
Yiyiphi eyona ndlela yokucoca iindlebe zakho
Abaninzi, ukuba akunjalo, abantu banengcamango ephosakeleyo malunga nokuba kuthetha ukuthini ukucoca iindlebe zabo. Into ekholelwayo kukuba kufuneka ucoce kwaye ususe i-wax, kodwa ngokwenene, malunga nokususa ukungcola, kuba umthwebeba asilotshaba. Ngokuchasene noko, i-earwax iveliswa ngokwemvelo kwaye umntu ngamnye uvelisa inani elifunekayo indlebe yabo.
I-Earwax yinkqubo yokucoca ngokuzenzekelayo eyenziwa ngumzimba kwaye yonke imihla iyayikhupha into engayifuniyo. Le wax yendalo inoxanduva lokuthintela izinto zangaphandle ukuba zingangeni endlebeni. Ukongeza, inoxanduva lokugcina i-pH yezinga eliphezulu. Ngoko ke, ukuba newax yendlebe kuyindalo ngokupheleleyo kwaye ayilophawu lokungcola. Xa sicoca iindlebe, into ekufuneka siyenze kukucoca ukugqithisa kunye nomphandle weendlebe. Qaphela indlela ongayenza ngayo ngokuchanekileyo nangokukhuselekileyo.
Ubushushu obuvela emanzini kunye nomphunga owenziwe kwindawo yokuhlambela ngexesha lokuhlamba, yenza izixhobo ezigqibeleleyo zokucoca iindlebe zakho ngokukhuselekileyo. Kufuneka nje uthambekise intloko kancinane kwaye vumela amanzi ashushu ehle ezindlebeni zakho imizuzu embalwa. Emva koko, faka intloko kwindawo ethe nkqo, ukwenzela ukuba amanzi aphume kwaye athwale i-wax engaphezulu kunye nayo, ethambileyo ngamanzi ashushu.
Xa ugqityiwe, sebenzisa ibhola yekotoni ukususa imingeni ye-cerumen kwaye uthathe ithuba lokucoca ngaphandle kweendlebe ngokunjalo. Kwimeko nayiphi na into, kuphephe ukufaka i-swabs ezindlebeni, kuba uya kukwazi kuphela ukufaka i-wax ngokunzulu kwaye inzulu kumjelo wendlebe, kubangela i-tamponade kunye nokuphazamiseka okukhulu. Akufanele usebenzise izinto ezichongiweyo, ezinokukwenza umonakalo omkhulu kwaye zibangele iingxaki ezinzulu.
Ukucocwa kweendlebe kufuneka kutshintshe, kuba ngokutsho kweengcali akukhuthazwa ukuba zenze yonke imihla. Ukongeza kumanzi afudumeleyo kwindawo yokuhlamba, ungasebenzisa ezinye iimveliso kule njongo, njengamanzi olwandle. Kuyimveliso yendalo eyazisa amanzi olwandle kwi-canal indlebe, ithambisa i-wax kunye inceda ukugxothwa kwayo ngokwemvelo ngaphandle kokonakalisa indlebe. Le yeyona ndlela isebenzayo yokucoca iindlebe zakho, kwaye enye kufuneka uhlale usebenzisa iintsana kunye nabantwana abancinci.
Indlela yokunyamekela impilo yeendlebe zakho
Ukongeza ekucoceni ngokufanelekileyo iindlebe zakho, kubaluleke kakhulu ukunyamekela impilo yakho ngemikhwa emihle. Ukusetyenziswa kwee-headphones umzekelo, kuyingozi kakhulu xa kwenziwa ngokugqithisileyo. Kuba kubonisiwe ukuba ukusetyenziswa kwezixhobo zangaphandle kunye nezigcina-ntloko kunokubangela izifo kunye nokungeva kakuhle. Ngendlela efanayo, ingxolo enkulu kakhulu, ukumamela umculo ngomsindo ogqithiseleyo kwaye ngokukodwa kwiindawo ezincinci, ezifana nemoto, kwandisa umngcipheko wokulahlekelwa. ukuva.
Ukunyamekela impilo yeendlebe zakho ngezi ngcebiso, zilula kwaye zilula ukuziqhelanisa nemigaqo yococeko. Ukukwazi ukuva lilungelo elingenakubonwa ngabantu abaninzi nelinciphayo njengoko ubomi buhambela phambili. Kuphephe ukungeva ngokupheleleyo kwaye ke, ungazonwabela zonke izandi ezihamba nathi yonke imihla kubomi bethu bonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » Indlela Yokucoca Ngokukhuselekileyo Iindlebe Zakho
I-Skirt kunye neebhutsi eziphezulu, ukudibanisa okupheleleyo ebusika
Zonke iingenelo ze-massage gun